Nooc Dog 101: Waa maxay Labradoodle Guntin? - Taranka
Sidoo kale loo yaqaan Mini Labradordoodle , Labrapoodle , Labradorpoo , Labbidoo , ama Labrapoo , ah Isku-darka Minirad Labrador Retriever & Poodle waa xayawaan gurijoog ah oo aad u fiican.
Waxay yihiin a peppy isweydaarsi aan ahayn oo keliya caqli badan laakiin sidoo kale aad iyo aad qurux badan . Waxay aad ugu dhow yihiin inay qurux badan yihiin!
Haddii aad rabto inaad ogaato sida isku-dhafkan uga duwan yahay Doodle-yada kale, nala joog si aad si qoto dheer ugu fiirsato waxa Mini Labradoodles ku saabsan yihiin.
Asalka Labradoodle Ghadafi
Dabeecadaha jirka: Muxuu Yahay Labradoodle Guntin?
Waa maxay shakhsiyadda Mini Labradoodle?
Sidee loo daryeelaa Mini Labradoodles?
Caafimaadka iyo Nolosha rajada Mini Labradoodles
Iibsashada: Waa imisa qiimaha yarka yar ee Labradoodle?
Ma u socotaa inaad mid ka mid ah Walaalahan ku yeelato Qoyskaaga?
In kasta oo abuuraha Doodle kii ugu horreeyay ayaa hadlay wixii ku saabsan inuu ku dhibsado noocyada naqshadeeyaha, waxaa loogu sameeyay ujeeddooyinka ugu fiican. The Heerka Labradoodle ahaa loo soo saaray inuu noqdo eey u adeegta hypoallergenic , taas oo ay aad u qadarinayaan eeyaha jecel ilaa maanta.
Wixii intaa ka dambeeyay, iskutallaabta Labrador-Poodle ayaa caan noqotay, Doodleyaal badanna waxaa laga helay bidix iyo midig. Haddiise la soo saari lahaa iskudhafyo kale, iyaguna waa la samayn jiray kala duwanaanshaha cabirka .
Eygan loo yaqaan 'doggo' waxaa loo tixgeliyaa inuu ku cusub yahay adduunka baaldiga, iyo sida ugu badan ee noocyada isku dhafan, ma jiraan macluumaad badan oo ku saabsan sida iyo goorta ay ka soo bilowdeen. Laakiin waxaa jira aragti ah in abuurka Australiyaanka ahi uu ahaa kii soo saaray Labratoodle-kii ugu horreeyay intii lagu jiray 1988.
Ujeeddada laga leeyahay isku-dhafkan ayaa ah in la abuuro eey waxtar u leh milkiileyaasha, gaar ahaan dadka waayeelka ah iyada oo leh jaakad udgoon oo hooseysa. Hadda, Mini Labradoodles waa nooc dhan ah .
Aqoonsiga, caannimadu qayb kama aha shuruudaha. Sidaa darteed, haddii aad ka fekereyso haddii isku-darka 'Miniature Labrador-Poodle' ay aqoonsan tahay Naadiga Kennelka Mareykanka (AKC), maahan. The Diiwaanka Eyga ee Mareykanka, Inc. (DRA) waxay aqoonsaneysaa noocyada kala duwan ee isweydaarsiga, oo ay kujirto labraddan yar ee Labradoodle.
In kasta oo isweydaarsigani aanu ka mid ahayn liistada saafiga ah ee ururada daaqa sare, waalidkeed waa! Marka bal aan aragno tayada ay leeyihiin Labrador Retriever iyo Poodle oo ay leeyihiin faracyadooda isku dhafan ay dhaxli karaan.
Labrador Retriever: Mid ka mid ah kuwa ugu cadcad qoyska
Labrador dib u habeyn
Endearingly naanays ahaan Shaybaarka , Labradors ayaa mar loo yeedhay eeyga Newfoundland ka yar ama John Dog , kuwaas oo ku saleysnaa halka ay ka soo bilowdeen. Markii hore waa la dhaqmi jiray si aad u soo ceshato ciyaarta ugaarsadayaasha aakhirkiina waxaa loo soo saaray inay noqdaan kaamil gundog .
Shaybaarada ayaa ah wali loo adeegsado ugaarsiga , laakiin waxaa badanaa loo arkaa inay yihiin xayawaanka guryaha lagu haysto , ama u shaqeeya noocyo kala duwan oo shaqo ah sida eyda adeegga . Waxay aqoonsi ka heleen AKC sanadkii 1917 halkaasoo ay si rasmi ah xubin uga noqdeen Kooxda Sporting .
Noocan 'Retriever' waa nooc dhexdhexaad ama dhexdhexaad ah oo dhererkiisu yahay 22 ilaa 24 inji (57 ilaa 62 cm) culeyskiisuna yahay 55 ilaa 79 rodol (25 ilaa 36 kg), halkaasoo dheddigga xoogaa yar ka yar ka badan labka.
Labrador Retrievers waa jaangooyooyin soo jiidasho leh, sidoo kale. Waxay leeyihiin isbaddalkan isboorti iyo a cimilada u adkaysta, jaakad laba-lakab ah taasi waxay noqon kartaa madow, jaalle, ama shukulaato. Madaxa nadiifka ah, qalfoofka ballaaran, iyo daamankiisa xoogga leh ayaa laga yaabaa inay cabsi geliyaan, laakiin iyagu waa muujiya fidos leh indho naxariis leh . Kuwa ay dabeecad wanaagsan iyo caqli wanaag ku dar sifooyinkeeda ugu sarreeya.
Poodle xarrago leh oo xariif ah
Layaab ma leh sababta Poodles badanaa loo doorto in lagu daro noocyada kale. Waxay leeyihiin timo jilicsan oo jilicsan oo daadanaya hooseeya, ama qaar baa tixgelinaya hypoallergenic , waxayna ka mid yihiin eeyaha ugu caqliga badan adduunka!
Kuwani smart Poos sidoo kale waa ciyaaraha fudud iyo wax badan. Marka la eego dabeecadda, iyagu waa dad aad u daacad ah, ciyaar badan, laakiin sidoo kale waxay noqon karaan kuwo xoogaa sarreeya oo aad u xasaasi ah.
Cabir ahaan, Poodles ayaa soo gala saddex nooc ama kala duwanaanshaha cabirka: Jaangooyada, Mini, iyo Toy.
Aynu diirada saarno Mini iyo Toy Poodle maadaama labadoodaba loo isticmaali karo in lagu soo saaro 'Miniature Labradoodle'.
KU Mini Poodle wuxuu taagan yahay qiyaastii 11 ilaa 15 inji (28 ilaa 38 cm) dhererkiisuna wuxuu gaaraa 15 ilaa 17 rodol (7 ilaa 8 kg). Poodles Ciyaaraha waa yar yihiin waxayna gaari karaan oo keliya 10 inji (25 cm) culeyskiisuna yahay 6 ilaa 9 rodol (3 ilaa 4 kg).
Iyadoo aan loo eegin cabbirka, Poodles waxay leeyihiin muuqaal gooni ah oo ka baxsan jaakadooda. Waxay daadiyeen dhagaha iyo muuska dheer, iyo sidoo kale muuqaal leggy ah oo ka dhigaya inay ku dhaqaaqaan socodka guga, socodka.
Iyada oo leh astaamo badan oo kala sooc ah oo u dhexeeya labadan waalid ee waalidkood, waan awoodnaa filo natiijo la yaab leh loogu talagalay cunugooda isku dhafan.
Iskutallaabta 'Miniature Labrador' iyo 'Poodle cross' waxaa laga yaabaa inay u ekaadaan inay waalidkood ka dhaxlaan muuqaalka waalid kale. Xitaa haddii xiriirkoodu uusan ahayn 50/50, waxaa jira astaamo aan ka filan karno goos gooskan.
Guud ahaan, Mini Labradoodles ayaa leh madax wareegsan leh sanka dhererka dhexdhexaadka ah , iyo kuwooda dhegaha floppy leeyihiin guntin wareegsan.
Indhahooda cayaaraha ah hadana ruuxi ruuxi ah ayaa noqon kara bunni ama nirig , laakiin kiisaska halka midabka jaakadu uu mid yahay, Mini Labradorpoos wuxuu yeelan karaa indho buluug ah, ama hal il ayaa leh midab ka duwan kan kale.
Waa kuwan fiidiyowga Lily, ee yar yar ee Labradoodle ah, oo laga yaabo inuu kaa dhaadhiciyo in nashqadeeyahaan naqshadeynta ah uu noqon karo eyga ugu xiisaha badan ee hareeraha ku wareegsan:
Waa maxay cabirka Mini Labradoodle?
Kala duwanaanta weyn ee dhererka iyo culeyska u dhexeeya Labrador Retriever iyo Miniature Poodle, faracooda isku dhafka ah ayaa kala duwanaan doona, sidoo kale. Mini Labradoodle wuxuu leeyahay dherer 14 ilaa 16 inji (36 ilaa 41 cm) iyo culeys ah 15 ilaa 25 rodol (7 ilaa 11 kg).
Haddii aan is barbar dhigeyno cabirkooda celcelis ahaan iyo kan caadiga ah 'Labradoodle', aad ayey uga weyn yihiin maaddaama ay taagan yihiin ilaa 21 illaa 24 inji (53 illaa 61 cm) dherer ah oo culeyskoodu noqon karo 65 rodol (29 kg).
Sababtoo ah Mini Labradoodles waxay ku jiraan dhinaca yar ee miisaanka eyga, iyagu waa ku habboon in lagu noolaado dhammaan noocyada guryaha , xitaa guryaha!
Haddii ay dhacdo inaad isweydiiso, Guntinta Labradoodle ayaa noqota si buuxda u koray da'da 13 bilood .
Cunsurka kale ee saameyn ku yeelan kara cabbirka tarankaasi waa abtirsiinyadiisa ama jiilkiisa. Erayada guud ee laxiriira Doodles waa F1, F1b, F2, iyo wixii lamid ah.
F1 ama jiilka koowaad Labradoodles-ka yar-yar ayaa ah dusha sare ee cunnooyinka oo ay soo saaraan isugeynta Labrador Retriever iyo Miniature Poodle.
Halkaas, baarayaashu waxay fiirin doonaan inay fiiriyaan bal in eyda F1 ay wada shaqeyn la yeelan doonaan Mini Poodle kale si ay u soo saaraan farac yar ama ay u xoojiyaan sifooyin badan oo Poodle ah, sida jaakadda. Qashinka lagu soo saaro hawshan ayaa la yiraahdaa F1b ama iskutallaabta dhabarka . Nidaamku wuxuu u sii socon karaa 'multigens' ama Labradoodles Australia .
Waa tan kan sharaxaad dhameystiran oo ku saabsan jiilalka gudaha Doodles iyo iskudhafyada kale, oo muuji sawirro sida geedka qoyska ama abtirsiintu u shaqeeyo.
Coat & Color of Paturele Miniature and Labrador mix
Marka laga hadlayo jaakadaha, dhogorta eygaan ayaa soo geli kara saddex qaabab . Kuwa qaba a jaakad ama jaakad jilicsan leeyihiin Labrador badan oo iyaga ku jira, laakiin caadi ahaan way hooseysaa in aan la daadin.
Haddii ay dhaxleen timaha Poodle, markaa way yeelan doonaan qufulka curly . Waxay u dhaxayn kartaa dhagan ilaa curl foosto dabacsan. Inta badan, noocan ahi waa mid aan daadin.
Dharka ugu yar ee ay Doodle-kan yeelan karaan waa a jaakad toosan . Midkani ma siinayo muuqaalkaas orso ee xiisaha leh. Waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin daadiyayaal hooseeya marka loo eego waalidkood Shaybaar.
Mini Labbidoos waxay ku yimaadaan qaabab kala duwan oo xiiso leh, sidoo kale. Waxaad ka heli kartaa iyaga oo ku jira madow, kareem, abrikot (sidoo kale loo yaqaan dahab), karamell, shukulaato, casaan, qalin, lavender, parti, buluug.
Ogow taas ciyaalkan ayaa wali badalaya midabkooda ilaa lix usbuuc ilaa labo sano jir ah . Tusaale ahaan, shukulaatada caanaha ah ee 'Mini Labradordoodle' waxay bilaabi kartaa inay hesho xoogaa timo cirro ah oo baadi ah.
Mini Labradoodles waxay leeyihiin oodles jacayl ah oo la bixiyo, sida waalidkood. Iyagu waa eeyo adeeg heer sare ah iyaga awgood saaxiibtinimo iyo dadka ka farxiyo shaqsiyaadka.
Qashin-wadaaggaani waa mid aad u daacad ah dhibna kuma lahan doono a eey reer wanaagsan markasta oo ay caruur iyo xayawaan kale joogaan.
Marka, haddii aad tahay laylis ama milkiil khibrad leh, hubaal waad u tegi kartaa isku-dhafkan!
Sida taxaddarka leh noocyada yaryar iyo kuwa carruurtu ku ciyaaraan, waqtiga ciyaarta ee socod baradka iyo eeyaha waaweyn waa in lala socdaa si looga fogaado dhaawacyada ama shilalka.
Mini Labradoodles wax badan ma ciyey?
Guud ahaan, isku darka Labrador-Poodle waa canine xasilloon oo nabdoon, mana u muuqdaan inay noqdaan kuwo dagaal badan. Laakiin waxaan hubnaa in qaar ka mid ah milkiilayaasha hadda ee noocani ay yihiin kuwa wax iibiya.
Dabeecaddan aan la jeclayn badanaa waxay dhacdaa markasta oo ay ku arkaan dad kale, eeyaha, ama xayawaanka dibedda gurigooda. Sidoo kale way ciyi karaan markasta oo aad booqato.
Ha murugoon maxaa yeelay Mini Labradoodles waa a caqli badan isweydaarsiga, taas oo macnaheedu yahay inaadan wax dhibaato ah ku qabin tababarka saaxiibbadaada afarta lugood leh.
Sida canine kasta, fido-kan sida ugu fiican ayuu wax u qaban doonaa marka la tababarto oo la dhexgalo sidii eeyo .
Mini Labradoodles ayaa leh tan oo tamar ah , waxaana kugula talineynaa inaad ka faa'iideysato tan si aad uga ilaaliso dhibaatooyinka habdhaqanka.
Haddii aad tahay orodyahan, qaado baalkaaga kal-fadhiyadaada tababarka 5K. Waxay sidoo kale noqon karaan kuwo aad u fiican dabaasha , gaar ahaan haddii suulasha eeygaaga ay leeyihiin webbing sida waalidkiis Poodle.
Ahaanshaha balanbaalis bulsheed, Labatarorpoo-gaaga Yar waxaa laga yaabaa inuu yeesho walaac kala tag.
Qaarkood waxaa la bari karaa inay la qabsadaan kala soocooda bini'aadamkooda, laakiin waxay u badan tahay inay ku habboon yihiin guryaha qof waligiis guriga joogo.
Eygan naqshadeeye wuxuu noqon karaa mid is haysta oo aan u baahnayn meel bannaan, laakiin kubbadaha dhogorta leh ee ay ka buuxaan baashaalka iyo tamartu waxay u baahan yihiin inay ku ekaadaan qaabka ugu sarreeya.
Milkiileyaal ahaan, shaqadeenu waa inaan siino daryeel iyo daryeel guud adoo qurxinaya, quudinaya, iyo jimicsi ku sameynaya dhallaanka dhogorta leh.
Arooska orso farriin yar yar Labradoodle
Waa sharci guud in la siiyo saxaradan a qubeyso 4 ilaa 6 toddobaad kasta iyo cadaya dhogorteeda laba jeer usbuucii . Laakiin wali waxay ku xirnaan doontaa nooca jaakad aad isku darka Mini Poodle & Labrador leedahay, iyo inta waqtiga ay ku qaadaneyso banaanka.
Kuwa doorbidaya in la nadiifiyo Labradoodle-yadooda Gunta yar, waxaad u adeegsan kartaa tirtirista kaneecada isku-dhafka ah, iyadoo fiiro gaar ah la siinayo caloosheeda, dabada hoosteeda, iyo bum.
Milkiilayaasha qaarkood waxay u keenaan Doodle-kooda muusikada bil kasta nadiifin buuxda. Haddii aad ku kalsoon tahay oo aad khibrad u leedahay jarista ciddiyaha xayawaankaaga, samee lixdii toddobaadba mar, sidoo kale.
Nadiifinta dhegaha iyo soo goosashada ayaa lagama maarmaan u ah isku darka Poodle. Waa kan fiidiyow sharxaya sababta iyo sida loo sameeyo:
Intee in le'eg ayay tahay inuu Gado Labradoodle?
Ha ku kadsoomin inta yar ee Doodle-kaaga ah maxaa yeelay Mini Labradoodle ayaa u baahan lahaa 1.5 ilaa 2 koob of kibbles qalalan oo tayo sare leh loo qaabeeyey midab yar yar ilaa mid dhexdhexaad ah . Haddii aad doorbideyso inaad quudiso ardaygaaga iyada oo ku saleysan shuruudaha kalooriga maalinlaha ah, waa tan sida waad xisaabi kartaa. Laakiin kuwa horay loogu bartay habkan oo kaliya u baahan kalkuleytar kalkuleytar, iska tag halkan .
Nooca cuntada iyo qaddarka aan siinno xayawaankeenna waa inay ku saleysnaadaan da'dooda, cabirkooda, heerka waxqabadkooda, iyo sidoo kale caafimaadkooda.
HA siinin lacag la’aan quudinta eygaaga ciyaalka ah maadama waalidkeed Labrador caan ku yahay cunis badan. Isku day inaad siiso 2 ilaa 4 cunto maalintii oo dhan. Haddii iskudhafkaaga Yar ee Poodle-Labrador Retriever uu si dhakhso leh wax u cuno, waad isticmaali kartaa feeders is-dhexgal in laga gaabiyo, iyo sidoo kale marka la siinayo daweynteeda.
Kaliya maahan inay ka fogaadaan cunnooyinka xad-dhaafka ah ama kororka miisaanka, laakiin waxay u badan tahay inay madaddaalin doonto cunuggaaga, sidoo kale!
Baahiyaha jimicsi ee Mini Labradoodle
Noocani wuxuu ubaahanyahay uguyaraan 30 daqiiqo ilaa saacad jimicsi maalintii. Laba socod oo dhaadheer agagaarka xaafadda ayaa ku filnaan lahaa in lagu qanciyo baahidaada fido ee ku saabsan kicinta jirka.
Haddii ay suurta gal ahayn in aad banaanka u baxdid cimilada darteed, ama aad mashquul ku tahay howlaha guriga ka socda, ciyaar caadi ah oo la soo qaado ayaan ku guul darreysan doonin. Maxaad ugu qaadan weyday cunuggaaga deyrkaaga waasac ah una oggolaan inay raacdo kubbadda ay jeceshahay hareeraheeda, ama xitaa inay iska jiifsato cawska waxoogaa wareeg ah ka dib?
Xitaa taariikh-ciyaar ama safar aagga eyga ayaa ka dhigi doonta mid ku faraxsan Mini Labbidoo!
Mini Labradoodles guud ahaan waa kuwo caafimaad qaba waxayna leeyihiin celcelis cimrigooda 10 iyo 15 sano.
In kasta oo noocyada isku dhafan la ogyahay inay ka caafimaad badan yihiin marka la barbar dhigo waalidkood sarsare awgood xoog isku dhafan , Weli waa suurtagal in Miniature Labradoodle aad ka dhaxasho cudurada hidda-socodka.
Qaar ka mid ah xaaladaha caafimaad Labrador Retrievers iyo Poodles waxay u gudbin karaan carruurtooda waa Progressive Retinal Atrophy (PRA), bloat, sinta iyo xusulka dysplasia, Cudurka Cushing, Cudurka Addison, Cagaarshowga Joogtada ah ee Firfircoon, iyo Burburka Jimicsiga ee Jimicsiga Leh (EIC) .
Haddii aad aad u xiisaynayso helitaanka yar yar ee 'Lab Laboodoodle', waxaa ugu wanaagsan inaad faham ka hesho xaaladahaas, iyo sidoo kale astaamahooda. Sameynta sidaas waxay ka caawineysaa milkiilayaasha inay kor u qaadaan caafimaadka xayawaankooda si aan ugu raaxeysto sanado badan iyaga.
Mini Labradoodle eeyaha yaryar waxay leeyihiin celcelis ahaan qiimaha $ 500 ilaa $ 2500 . Kharashyada waxaa saameeya arrimo ay ka mid yihiin qaddarka qashinka (oo ah an celcelis ahaan 8 arday for this), xariiqda dhiiga ama isirka, caan ahaanta, iyo meesha uu ku nool yahay.
Maskaxda ku hay in ey aad u qaali ah ama raqiis ah uusan dammaanad ka qaadaynin tayadiisa. Taasi waa sababta baaritaanka ama su'aalaha ay muhiim ugu yihiin kuwa soosaara iyo kuwa iibsada.
Ka digtoonow kuwa kaa iibin doona eey yar si aad u hesho lacagtooda. Waxaa jira welwelka caafimaadka iyo maskaxda kiciyey eeyaha naqshadeeyaha taranka iyada oo aan eeyaha danaha ugu fiican ee qalbiga ku jirin. Mashiyooyinka yaryar ee loo yaqaan 'puppy Mills' iyo kuwa aan mas'uulka ka ahayn ee beeraleyda ah waxay waxyeello u geystaan ​​iyaga oo ilaalinaya eeyaha aan caafimaadka qabin inay tarmaan si ay uga helaan faa'iido deg deg ah.
Weydiinta su'aalaha muhiimka ah, codsi inaad soo booqato Ey yaryar si ay ula kulmaan waalidiinta iyo qashinkeeda.
Sidoo kale waa fursad aad u fiican u fiirso hareeraha eeyaha si loo ogaado haddii si fiican loo daryeelay, iyo sida ay u dhaqmaan markay arkaan mulkiilahooda hadda, iyo markay la kulmaan shisheeyaha.
Intaad halkaa joogto, weydii fiiri dukumiintiyada caafimaadka ee waalidiinta ardayda. Haddii ardaydu horey u lahaayeen xoogaa tallaal ah oo ay leeyihiin diiwaanno dhakhaatiir ah, markaa abuure sumcad leh ayaa xitaa si firfircoon kuugu tusi doona adiga.
Soosaarayaasha yaryar ee 'Labradoodle & kennels'
Diyaar ma u tahay inaad bilowdo raadintaada yar yar oo ah 'Lab Labordordoodle' yar? War wanaagsan! Uma baahnid inaad mar dambe u baxdaa si aad u raadiso kuwa soo saara halkaasoo laga heli karo noocani. Thanks to tiknoolajiyada, way fududahay in la helo aqal loogu talagalay noocyo iyo isku dhaf gaar ah.
Fiiri websaydhyada iibiya eeyaha yaryar ee Labradoodle. Waxay noqon karaan xitaa u dhow aaggaaga , taas oo macnaheedu yahay haddii aad wax ka iibsato, way fududaan doontaa inaad iska hubiso oo aad soo qaadato ilmahaaga!
Mini Labradoodle Puppy (Greenville, SC)
Suuqyadan ayaa mudan in la hubiyo, sidoo kale, sida Eeyaha Greenfield iyo Eeyaha Lancaster .
Mini Labradoodles si loo badbaadiyo ama loo korsado
Korsashada eey ama eey ayaa aad uga sahlan jeebkaaga maadaama ay badanaa ku kacayaan kudhowaad $ 300 . Qaddarka ayaa inta badan daboolaya tallaalada iyo daryeelka loo fidinayo eeyga inta ay ku jiraan hoyga. Qaar ka mid ah xitaa waa la tababaray intii ay halkaa joogeen!
Haddii aadan waligaa waligaa badbaadin malaa'ig dhogorta kahoreysa, waa inaad ogaataa in asalkooda marwalba aan la aqoon, sida waalidkood. Mararka qaarkood, xitaa isku dhafka noocooda gaarka ah!
Si kastaba ha noqotee, badbaadinta ama korsashada eey waa wax sharaf leh in la sameeyo. Waxay siin doontaa mid ka mid ah bakhaaradaas saboolka ah fursad kale oo nolosha ah inuu jeclaado kana mid noqdo qoys.
Waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah dhallaanka dhogorta leh uu xado qalbigaaga waana wehelka aad waligaa raadineysay:
Samatabbixinta Goldendoodle iyo Labradoodle (Reinholds, PA)
Samatabbixinta Doodle Inc. (Warwick, RI)
Samatabbixinta Doodle Rock (Dallas, TX)
Mini Labradoodles waa a eey fantastik ah in lagu yeesho qoyska. Waxay yihiin gaar ahaan xayawaannada aan caadiga ahayn haddii adiga, lammaanahaaga, ama carruurtaadu ay yihiin firfircoon iyo inay diyaar u yihiin inay ka qayb galaan jirkooda iyo maskaxdooda.
Kuwaas hoose- aan daadin Doodles waxay ku yimaadaan qaansoroobaad midabbo leh iyo noocyo dhogor ah oo ku habboon dhadhankaaga. Iyaguna waa daacad ah, aad u naxariis badan, oo si qallafsan u caqli badan .
Maxay kula tahay Hal guri ma keenaysaa? Mise mid hore ayaad haysaa Ii ogeysii faallooyinka.
Ma yahay kareemka kareemka Ingiriisiga Dahabka ah Goldie ka wanaagsan?
magacyada shaybaarka madow ee dumarka
ilmo cad oo xariijimo bunni ah
Adhijir Jarmal cad oo magacyo dumar ah
Jarmal Shepherd mini poodle mix
meeqa rummaan cad